DAAWO: Gudoomiyihii Baarlamaanka Galmudug iyo Cabdikariin Guuleed oo Iyagoo yaaban Shir ku qabtay XAMAR | Kalshaale
DAAWO: Gudoomiyihii Baarlamaanka Galmudug iyo Cabdikariin Guuleed oo Iyagoo yaaban Shir ku qabtay XAMAR
Jan 11, 2017 - 31 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Waxaa magaalada Muqdisho Warbaahinta kula hadlay Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug iyo Madaxwaynaha Galmudug C.kariim Xuseen Guuleed.
Waxay si isku mid ah ugu Gacan Saydhee Go’aanka kasoo baxay Baarlamaanka Galmudug ee Xilka looga Qaaday C.kariim Guuleed, Waxayna ku sifeeyeen Talaabada ay Qaadeen Xildhibaanadu mid Sharci Darro ah.
Madaxda Galmudug ayaa lagu eedaayaa inay inta badan ku sugan yihiin Muqdisho, Iyadoona Taasi ay keentay in iyagoo dalka ka maqan Xildhibaanada Galmudug ay Meesha ka Tuuraan.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (31)
Saax ka qaada mj ayuugu shushubtee hhhhhhhhh good news
Guuleed iyo gudoomiyaha parlemanka qalad ayey fahmeen, ma fahmin waxa parlemantry democracy tahay!!!!!!! Kkkkkkkk
Waxay moodeen in ayaga parlemanka maamulaan, ma oga ayaga la maamulo!!!
Kuye aniga guddoomiya ayaa kala dirnay oo fasax siinay oo meesha joogin!!
Ma oga miyaa in aqlabiyad labada saacadii la doono la tuuri karo.. Dhagajuun cidna ma hogaamin karo.
Hadaad dood qabtaan adiga iyo gudoomiyaha maad Cadaado taagtaan oo isdifaacdaan.
Abaaro kulul iyo parlemankii oo kaa shiraya inaad Xamar fadhido haday kaa yeelaan walaan wax Galmudug ladhaho jirayn.
Inaad Cadaado ka degto degdeg ayey ahayd adiga iyo guddoomiye sheeganaya..
Walle dadkaas gobolada dhexe alle ayaa u maqan.
Waxaas Galmudug iyo meel la mid ah ayey ka suurtoobaan.
Ma parlemanka ayaa ku xukuma mise adaa xukuma oo ayagaa ku keenay, in the first place
Meesha waxaa isku haysta dad raba inay maamul samaystaan la mid ah maamulada kale iyo dad siyaasad u isticmaala maamulka Galmudug oo dadka iyo waxa ku lool yihiin kala jeclayn.
Dhinac ayey u dhicin, ama maamul ayey noqon ama waa lagu kala tegin.
Yaab! Kuraas qurxoon oo Xamar taal ayaa la isku sawirin sida ay Xamar matalaan!!
Agtayda labada waa ruqso.
Viva reer Cadaado, iska qabta Damujadiid .
Aniga aragtidayda baarlaan kusheegu xaq bay uleeyihiin inay caydhiyaan guled yacni wax micno ah ma samaynayso maqnaanshaha gudoomiyaha barlamanka waayo hadaba waxay dhihi karaan kaalay cod kale naga qaad wayna caydhin balse xisaabta ku darsada dadka uu guled rabo inuu xukumo inayna ahayn dad sahlan, waana indhacade, suudi yalaxow, qabdiid iyo barre hiiraale iyo qaar kaloo badan kkkk subxaana laah,
Meeshaas waxaa isku arkay dadkii ay somaliya kadagi wayday 26 sano guledna waxaa u roon inuu kadhex baxo ha is baadheene yacni isbaaro kkkkkkkkk
c guuleed waxa ku dhacay inkaar ah dadkii doortay uu ku daba furay waayo iyadoo uu dhacayo dagaalkii 2bada maamul buu la qadaynayey gaas oo lalahaa waa la heshiiyey maalinta ku xigtana waa dagaal kale miyaanu ogayn waxa socda mise wuu la qabaaba
war majertenku iyagaa yaqaana sida wax loo maamulo ee waa inay mooryaanta kala qabtaan kkkkkkkkk
Nasro, dadkan anagaa lahaan jirnay hadana leh ee maxaad ka hadlaysaa! dee orod oo wax usoo tar kkkkkkkkkkkkkkkk kaftan.com
Aad baan unec bahay dadku markay wax qabsan waayaan in dad kale lagu marmarsado, waana khalad in go’aanka xildhibaanada ladhaho mj baa ka dambeeyey kkkkk
jugle ilaahay baa dadka leh ee faanka iyo beenta intaad wadi waxas ban ahan jirnay uun baad haysaane somali kala huleeshay sababtana waa xukunkii loo dhiibay adeerkaa dunidoo is wada haysta somaaloo walala ah waa idinkii ku riday hoga uma qabo in ay ka soo noqonayso
ta alle mooyee waayo nin waloo caqli lihiba waa arkaa sansaanka baxaaya
sidaasay ku jiraysaa hadaan alle u bixin cid badbaadisa madaxwayne kastaa ma hagaajin karo hadan shicib la wadin
Waxaan umalayni dadkii meeshan soo gali jiray inay Facebook u wareegeen, maalmahan Facebook ayaa shidnaa oo waxaan arkayey sawiro siilaanyo oo aroosay xasan culusow iyo xasan culusow oo siilaanyo oo saqiir laga dhigay golonka ku sita sidii kaanguuro ilmo yar sidata kkkkkkk
ugaas jugle xildhibaan ku sheega baan ku qosley awalba gal isbaaro film bay jilayeen
jugle labo wajiile hada wa ad lahed barlamanku sharciga ha dhowro hadana waxad ledahay guuled ha la ceyriyo yaab puqland miya tageersan aya maqashay shaqada barlamaanku qabteen se wax u jitan jir jiroole kkkkkkk
galmudug dhaqaaqday oo hana qaaday ka naxoow naxuus dimuqaradiya ayay la taaban yihin somali wa rer badiye labo nin oo murmi haday arkan in mamulka lagu kala tagay ayay u haystaan yahu viva galmudug
Nasro, indr faan ma ahan ee anagaa somaliya kadhignay dowladii afrika ugu xooga waynayd, hadana anaga umbaa kadhigi karna, faan ma ahan ee anagaa keenay dowladii la dagaalantay 32 dowladod oo uu ruush kujiro halka aad idinku keenteen in ugandisku reegeena dhufaano kkkkkkk
Muno, indr anigu guled baan taageer sanahay ee sidaas ula soco kkkkkk
Hadeey mooshinka keeneen xildhibaanadu eeysan ku qanacsanen guled heesaga tago xilku waa wareegto.
Cadado maxaa loo xiraa hadi ku qancin xilka waa laga qaadi karaa denbi maeesan gelin howshi loo dirtana hadu khaban waayey madaxweyne mala fiirsanaa cajeeb cajeeb.
Nimciina, waxaa loo xirayaa daanyeeradaan qaswadayaasha ah, iyaga oo sharciga jabiyay, xasilooni darro siyaasaded oo saameeyn doonta xasiloonida amnigana sabab u ah.
Waagii dowladhii hore ee General Siyaad Barre, waxii fowda iyo dowlad diid ah, waa laxiri jirray, oo dadku waa cabsan jirreen. Kadib burburkii iyo dagaaladii ahliga, dadkii waxeey noqdeen daanyeero aanan dan kalaheeyn waxa eey sameeynayaan waxa ka dhalan, oo xargihii ayeey goosteen. Taasina waa sharciga keeynta iyo daanyeerada oo dadka Somaliya eey caadiga kadhigteen badankood.
jugle kk nafaqo daarood gabadhii idiin bixisay farxiya waa ku sintay hadaka
32 dowladood kkk alla maxaa aqyaali ku jirtaa haku taagnaato bal soo celi hada hadii aad karto faankii yaabay
waxa la yiri dad shisheye ah ayaa dab ku shidaya…..arinkaasi waa been
dhinaatada ugu wayn waxaa ku haya beelaha HAWIYE tusaale cayr wuxuu xirtay dhiusamareeb iyo guri ceel sacad kuma wada qanacsana guleed iyagoo ku coladinaya xirirka damujadiid saruur duduble wacaysle iyo murursade iyaga degan kooda alshabaab baa ka talisa iyaga warkoda daa mesha reerka saleban waxa ka go.an in la helo maamul dadka u shaqeya oo looga baxo isbarada marka galmudug. Yaa duminaya ..ma dadkeda mise dad kaloo aan talo ku lahayn
markaa arinta galmudug waa inay belaha Hawiye runta ka shegan waa inay la imadan talo midaysan labo mid inay si dhab ah u garab istagan mamul iyo dowladnimo iyo inay ku jiraan fowdo siyasadeed
Somaliya ama Somalidu qofna xil kama qaadikaraan – mana saarikaraan,oo dhaqankooda ayaan u saamaxayn inay dad noocaas ah noqdaan.
Somaligu xilka si qalad ah ayuu ku yimadaa intaa uu joogana rafasho ayuu ku jiraa.Xilka qaadista lagu sameeyay Mr.Guuleed way iska shuuqidoontaa = Mr Guuleedna Madaxwaynaha Galmudug wuu ahaan doonaa.Kuwan sheeganaya Xildhibaaanada ee waxbaan casilay iyo Madaxwayne ayaaan xilka ka qaadnay ku hadaaqayaa maba yaqaanaan ama umaba qorna siyaabaha uu madaxwaynuhu xilka ku waayo.Dana yar oo hoose ayay jeebka ku sitaan sida ay kuwa kale Somaliyeedba jeebka ugu sitaan midida xumaanta.
Markaa,wax lala yaabo maaha isqabq
Absolutely, waa runtaa in kuwan qaswadayaasha ee leh Madaxweeyne ayaan xilka ka qaadnay in eey danno yar, oo daanyeernimo ah jeebka kusitaan. Sidoo kale, waa runtaa, daanyeeradaan maba yaqaanaan sharci iyo kaladanbeeyn, iyo waxyaabaha Madaxweeyne qabiil xukunka looga qaadi karro. Waa daanyeero cawaan ah.
arintaasi waa in qilaab waana arin aan laga fiirsan waxayna ka mid tahay dhibaatooyinka soomaaluda haysta lkn wax soconaya maaha sababtu waxa weeye talaabo kasta oo baarlamaanku qaadayo waa in gudoonka bar lamaanku la socdaa markaa arintan maaha mid sharciya wiki wado khaldan mara oo soomaaliya halaga hortago guuleed galmudug issgaa haysta
Ani wali waxaan taagnahay in GALMUDUG bur-burtay.
SACAD inta deggan MUDUG la soo raaciyo PUNTLAND.
Inta kale ee deggan GALGADUUD, ku dar MAREEXAAN in la raaciyo HIIRSHABEELE.
Waayo, HABAR GEDIR isma maamuli karto. HABAR GEDIR ma haaysato dhaqaale wax lagu maamulo.
HABAR GEDIR inta tuusan tuulada CADAADO, xaarkii baa kuwa dhigay, GAAJO, GAAJO, GAAJO.
MUNA CADEEEY, ku aaway, SACAD waa u ergeenaynaa in PUNTLAND aqbasho, lagana siiyo boosas iyo jagooyin ay ku qacanaa SACAD WEYNI.
Hadalkayga been ha moodina, hadii aysan maantay dhaceen, berri beey dhicidoontaa, waana arki doontaa.